မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): တာချီလိတ်တွင် ဘိန်းဖြူ အမြောက်အမြား ဖမ်းဆီးရမိ
ဒီအီးမေးသို့ - ဆက်သွယ်ရန်/သတင်း၊ဆောင်းပါးများပေးပို့ကြပါ--
ဆရာတော်များ၏တရားဆိုဒ်များသို့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်းကွန်းဆရာတော် သဲအင်းဂူဆရာတော် သီတဂူဆရာတော် မဟာစည်-၁ အေးရိပ်ချောင်မဟာစည်ရိပ်သာ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ ဖြူးဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဓ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆန္ဒာဓိက မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ အရှင်ဇဝန-၁ အရှင်ဇဝန-၂ ဆရာတော်ဦးဝိဇယ ဓမ္မဒေါင်းလုပ် ဓမ္မရံသီ ဓမ္မဒါန ဓမ္မပေါင်းချုပ် E-Dhamma Burmese Classic တရားများ နိဗ္ဗာန်န တရားတော်များ-၁ တရားတော်များ-၂
သာသနာထွန်းကားရာဘလော့များ သီတဂူဓမ္မဝိဟာရ သီတဂူဦးဇင်းလေး ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၁ ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၂ ဓမ္မသုခ ဓမ္မရနံ့ သန့်-တည်-ပွား ဆရာဦးမြင့်လွင် အဖြူရောင်မေတ္တာ-၁ အဖြူရောင်မေတ္တာ-၂ ဓမ္မမေတ္တာ ဝိမုတ္တိသုခ ဝိမုတ္တိရသ မေတ္တာပေတော ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ကိုထွန်းထွန်းလှိုင် အောင်မြေ သီတဂူဓမ္မဝိဟာရ ဓမ္မရေစင် ဓမ္မရသ ကောက်တေး-သိင်္ခ ပါရမီ အလင်းစေတမာန် ရွက်ဝါ အေးငြိမ်းပျော်ရွင် သစ္စာအလင်း အလင်းများရှိရာသို့ A light of Dhamma အလင်းရောင် ဘားမားမောင် အလှတရား ကိုမင်းဝေ သုခရိပ် ရွှေကြာ တရားတော် ဝိုင်အမ်ဘီအေအလှူဒါန ဓမ္မရိပ် သစ္စာတရား မြတ်ဗုဒ္ဓ ထေရဝါဒသာသနာ မနက်ဖြန် ဥပသကာ အရှင်ကုမာရ ဓမ္မပဒ ဘုန်းဘုန်းဦးဝိစိတ္တ မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများ ဓမ္မဟေဝန် ရည်ရွယ်ရာ အပြစ်ကင်းသောနေရာ အနတ္တလက္ခဏ ဦးကောဝိဒ ဆရာလေးဒီပင်္ကရာ လောကချမ်းသာ ဓမ္မဆုံချက် တောင်ပေါ်သား စကြာဝဠာ ဘာဝနာဗလဖိုရမ် ဒဿနခရီးစဉ် ကိုငယ်
Sunday Time In Sri Lanka
Reuters News & Video
စုကိုဝန်းရံ နအဖကိုတွန်းလှန် ဒို့ရဲ့အောင်လံ---
» Access To Insight
» American Buddhist
» Australia Buddhism
» Bhavana Society
» Birmingham Vihara
» Buddha Mind
» Cologne Buddhists
» Buddhism in France
» Buddhism in Switzerland
» Dhamma Download
» Dhamma Net
» Dhamma Study
» Gautama Buddha
» Germany Buddhist
» Houston Buddhist
» London Vihara
» Metta Net
» The Buddhist Society
» Washington Vihara
» What the Buddha Taught
» ယနေ့ မြန်မာ
» shwe အိပ်မက်
» တနေ့ မြန်မာ
» သီရိလင်္ကာ ရဟန်းတော်များ
» အတ္တကင် ဒီမိုကရေဒီ လွင်ပြင်
» ထေရ၀ါ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ဟွးရေး
» ၂၀၀၉ စီအေစီ
» Generation Wave
» Soe Mya Nandar Thet Lwin
» Cambridge Dictionary
» English-Myanmar Dictionary
» Long Man Dictionary
» Myanmar Spelling (အရိုင်းပန်း)
» Myanmar-English Dictionary
» Oxford Dictionary
» The Free Dictionary
» Visual Dictionary
» Websters Dictionary
Bun ထားရင် ကျော်ဝင်မယ့်
» ၀တ်ဆိုဒ် အဘိဓာန်
» လူငယ် နှင့် ပညာရေး
» အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်
» AutoCAD Drawing
» New Generation of Metropolitan
» ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ
“စကားပြောရန် C BOX”
သူမြတ်တို့ထံ ၊ နာခံတရား
လျှောက်ထားမေးခြင်း ၊ မပြုပျင်းက
ညံ့ဖျင်းပညာ ၊ ထုံထိုင်းစွာ၏
ကြားနာဓမ္မ ၊ သုတဖွေစစ်
ကျိုးပြစ်အရေး ၊ လျှောက်မေးတက်စွာ
သူတကာမူ ၊ ပညာကြွယ်နက်
ငါတို့ဖြစ်ရ ၊ ဤလောက၀ယ်
ဘ၀သမိုင်း ၊ မရိုင်းစေရန်
စိတ်မာန်မချ ၊ မာနမပါ
တို့ စွမ်းရာဖြင့် ၊ တို့ သာသနာ
တို့ ပြည်ရွာကို ၊ သာယာစေမှု
လုံ့ လပြုအံ့ ။
အပြင်းထန်ဆုံးသော လူထုတိုက်ပွဲ အတွက် ပထမအဆင့် ခြေလှ...
ခမရ ၅၁၅ မှ ဗိုလ်ကြီးကောင်းဇံမှ ချစ်ဇနီးထံပေးစာ
နအဖ အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းမှုဒဏ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသခံတွေ ...
Verdict delayed in Suu Kyi trial
အမှုကို ခန့်မှန်းပြောခြင်းသည် `တရားရုံးကို မထီမဲ့မြ...
စာပေဟောပြောပွဲတက်ရန် ရပ်ကွက်လူထုကို ဖိအားပေး
ဖားကန့်ရှိ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက ဖျက်...
ဇူလိုင် (၃၁) အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ
ရသေ့ကြီး၏ အရက်အလှူခံ (ကာတွန်း ဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်း)
ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်နေတဲ့ ဟောဒီအာဏာရူးတွေရဲ့ လက်ထဲမှ...
ကတိနဲ့အညီ အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောင်ကျလိမ့်မည်ဟု ဦးဝင်းတင် ထင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားခဲ့ဟု သတင်း...
အဖမ်းရခက်လို့ ရန်ကုန်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှု စိစစ်မ...
လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သော မှတ်သားဖွယ်ရာ အဆိုအမိန့် မ...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့  မှ အထူ...
တိုက်ပွဲဝင်ဖို့  အားလုံး အသင့်ပြင်ကြ။
Child soldiers Burma,s SONS OF SORROW
ဥပဒေ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ လုံး...
ကျုပ်လည်လည်သွားမိတယ် အိမ်ရှင်မဖိတ်ဘဲနဲ့ 
ဒေါ်စု တရားဆိုင်နေချိန်တွင် ထောက်ခံသူများက စုဝေး ဆန...
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်သူများပြ...
မောင်ချစ်သူရဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း စကားများ
အမေရိကန် တရုတ် ဆက်ဆံရေး ခေတ်သစ် ထူထောင်ဖို့ အိုဘား...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၇-၇-၀၉)
အကြွေပါလား (ကာတွန်း ဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်း)
My Village and NayPyiDaw
ရန်ကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး စာရ...
တောင်ပြုန်း ပွဲတော်ကြီး နီးလာပြီ
ဒေါ်စုအမှု တရားခွင်သို့ မြန်မာ့အလင်းသာ ဝင်ရောက်ခွင့်...
ဒေါ်စုအမှု အင်္ဂါနေ့ ထပ်မံ ရုံးချိန်း
အွန်လိုင်း ငွေပေးချေရေး စနစ် မြန်မာပြည်တွင် စတင် စ...
နအဖ ငွေစက္ကူ အထိမ်းအကွပ်မဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေမှုကြောင်...
၀န်ကြီး ကလင်တန် မြန်မာ့အရေးစွက်ဖက် စစ်အစိုးရသတင်းစ...
365 days and beyond
Stop Dengue. Act Now!
တော်လှန်ရေးဆိုတာ လုပ်သင့်သလား ?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု လာမည့် တနင်္လာနေ့သို့ ထပ်မံချ...
မီးစင်ကြည့်ကရင်း မီးလောင်ပြာကျတော့မယ့် စစ်အာဏာရှင်...
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်က ကျွန်တော်ရဲ့ကြေကွဲရတဲ...
“ဒေ၀ဒတ်ကို ဘုရားထင်” ဆိုသလို ရွှေမန်းကို သူတော်ကောင...
ရုရှားပြန် စစ်တပ်အရာရှိသုံးဦး ပြည်ပကို ထွက်ပြေးတိမ...
တကမ္ဘာလုံးနီးပါး ၀က်တုပ်ကွေး ပျံ့နှံ့
စင်ကာပူ ၀န်ကြီးချူပ်ဟောင်း Goh Chok Tong လည်း ဘုရာ...
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၇-၀၉)
ပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရစေတနာ ဆိုတာ..
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ရည်ရွယ်ချက်
အဖန်ငါးရာ ၊ ငါးကမ္ဘာ
အနန္တတာဝန် တို့အဓိဌာန်
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့နေများမှ တဆင့် ကုလသမဂ္ဂ...
ဝက်တုပ်ကွေး ထိန်းချုပ်ရေး နိုင်ငံခြားပြန်များကိုေ...
ရွှေဆိုင် လုယက်မှု မိသားစုဝင်များ ဖမ်းဆီးခံရ
ဒေါ်စု လွှတ်ပေးရင် မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး တိုးလ...
တာချီလိတ်တွင် ဘိန်းဖြူ အမြောက်အမြား ဖမ်းဆီးရမိ
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့တွင် ဘိန်းဖြူ ၇၆၁ ကီလိုဂရမ်နှင့် စိတ်ကြွဆေးပြားများ ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးမိကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထား...
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် A (H1N1) စစ်ဆေးမှု လုံလောက်မှု မရှိသေး
မြန်မာနှင့် ထိုင်း နယ်စပ်မြို့များဖြစ်သည့် တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်၏ တာချီလိတ်ဘက်ခြမ်းတွင် ဂိတ်ဖွင့်၍ နှစ်ဘက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သွားလာသူများကို A (H1N1) တုပ်ကွေးရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း လုံလောက်မှု...
ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရှမ်းအမျိုးသမီးလေး ဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) နမ့်ခမ်းမြို့နယ် နောင်မတာရွာ၌ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ဝင်၏ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၁၇ နှစ်အရွယ် ရှမ်းအမျိုးသမီး နန်းဖေါင်ခမ်း၏ ပါးပြင်၌ ဒဏ်ရာရသည့် ဖြစ်ရပ်...
မြန်မာများနှင့် စင်္ကာပူ သင်္ဘော၊ ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ အလုပ်အကိုင်များ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကစပြီး ကြည့်ရင်တော့ စင်္ကာပူမှာ သင်္ဘောကျင်းအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ရေတပ်အတွက် Sambawang Shipyard ရှိပါတယ်။ ဂျပန်တွေကလည်း Jurong Shipyard, Hitachi-Zoezin...
Posted by Sanghaalliance at 10:47 PM
The World Football News